Dhagxaan iyaga oo Holcaya cirka kasoo dhacay oo Waxyeelo badan geestay (Daawo Sawirada) – idalenews.com
Dhagxaan iyaga oo Holcaya cirka kasoo dhacay oo Waxyeelo badan geestay (Daawo Sawirada)
Dad tiradooda lagu qiyaasay kun qof ayaa la sheegay in dhaawac ka soo gaadhay, dhagxaan olalaya oo iyagoo sida kubada u duuban, xawaare sida gantaalada oo kale ahna ku socda ku habsaday jimcihii shalay dhinaca bari ee gobolka Ural ee dalka Ruushka.
Sida ay ku warameen wakaaladaha wararka dunidu, waxa gobolka Ural ee dalka Ruushka Jimcihii 15-ka February 2013-ka, ku habsaday dhagxaan hawada sare ka soo dhacay, kuwaas oo sida gantaalka u socday iyaga oo olalayana laga arkayay cirka ka hor intii aanay ku habsan degaankaas ee aanay sababin dhaawaca iyo khasaaraha tirada badan.
Dadka ku wax yeeloobay ayaa la sheegay in badankoodu ay ku dhaawacmeen daaqadaha guryaha oo markii ay burbureen, ku soo firdhay, waxaana burbur wayni soo gaadhay guryaha degaankaas oo markii dhagaxaas olalayay uu ku habsaday degaankaas sida dhul gariirka oo kale ugu burburay ama ugu dumay.
Dadka ku dhaawacmay shilkan ayaa badankoodu arkayay oo daawanayay markii dhagxaantaas oo sida kubad wayn oo kale ahi cirka ka soo dhacaysay, taas oo sida gantaalka oo kale xawaare aad u sareeya ugu socotay ka hor intaanay dhulka ku habsan ee aanay xaaladu halista gaadhin.
Maamulka dalka Ruushka ayaa sheegay in walaxdaas sida kubada oo kale u socotay ee dhagax ka samaysani, sababtay dhaawac iyo gubasho soo gaadhay dad tiradoodu kun ku dhow dahay, kuwaas oo ka mid ahaa dadka ku dhaqan degaanka bari ee gobolka Ural ee dalka Ruushka.
Ruushka ayaa ku tilmaamay in dhagaxani ka mid ahaa meerayaasha sabeeya ee dhulka ku ag wareega, kaas oo sida ay ku warameen ka soo gudbay gibilka sare ee oogada dhulka ka dibna markii uu soo galay, qaybta dhulka ee cuf is jiidadka leh xawaaraha uu ku socday awgeed olol sameeyay isaga oo ka hor intaanu dhulka ku dhicin isku dhegsanaa, ama marba sii kala firdhayay intii uu hawada dhulka ku soo jiray.
Degmadan uu ku dhacay ee degaanka Gobolka Ural ku taala oo lagu magacaabo, Hirbakul, ayaa sida la sheegay dhibaatada ugu badani gaadhay, barkada kaydka biyaha ee degmadaas taas oo iyadu sababtay in dhagaxaas ololkiisi bakhtiyo oo aanu dab wayni ka kicin.
Masuuliyiinta wasaarada masiibooyinka dabiiciga ah iyo gurmadka deg deg ah ee dalka Ruushka ayaa sheegay in goobtaas ay u direen, hawl wadeeno gurmad oo tiradoodu kun ka badan tahay si ay uga hawl galaan xaaladan argagaxa leh ee ku habsatay dhulkaas.
Mid ka mid ah dadka ku dhaqan degaankaas oo la hadlay wakaaladaha wararka dunida ayaa sheegay in isagu uu subaxnimadii hore ee jimcaha u soo baxay, hawlihiisa shaqo laakiin shaqo tagistiisi isku badashay gurmad iyo inuu wax ka qabto xaalada iyo masiibadan dabiiciga ah ee dhacday.
Xukuumada Soomaaliya oo lacag tii ugu badneyd dul dhigtay madaxa gacan ku dhiiglayaasha Khaarijiya wariyaasha (Daawo Sawirro)